अब वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पनि पेन्सन, कस्ताले पाउछन्? - Thulo khabar
अब वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पनि पेन्सन, कस्ताले पाउछन्?
काठमाडौँ: वैदेशिक रोजगारमा जानेले पनि चाहेमा स्वदेशमा पेन्सन पाउन सक्ने भएका छन् । विदेशमा गरेको कमाइको केही अंश बचत गरेर उनीहरूले स्वदेश फिर्ता भएपछि पेन्सनका रूपमा उक्त रकम पाउन सक्ने योजना नागरिक लगानी कोषले ल्याएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्न ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि)को प्राविधिक सहयोगमा कोष र रेमिट्यान्स कम्पनीको सफ्टवेयरलाई आबद्धता गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गरेको कोषले जानकारी दिएको छ ।,याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
भारतमा कोरो’नाबाट मृ’त्यु हुने व्यक्तिका आफन्तले ५० हजार क्षतिपू’र्ति पाउने ।
एजेन्सी : भारतमा को’रोना भाइ’रसबाट मृ’त्यु हुने व्यक्तिका नजिकका आफन्तले ५० हजार रुपैयाँको क्षतिपूर्ति पाउने भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदा’लतले कोरोनाको कारण मृ’त्यु हुने व्यक्तिका नजिकका आफन्तलाई ५० हजार रुपैयाँको क्ष’तिपूर्ति दिने सरकारी निर्णय सदर गरेको हो।
वकिलहरूले भारतको प्रको’प व्यवस्थापन कानून अन्तर्गत क्ष’तिपूर्ति माग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश माग गरेका थिए। अहिलेसम्म भारतमा ४ लाख ४७ हजार भन्दा बढीको को’भिडबाट मृ’त्यु भएको औप’चारिक तथ्याङ्क छ।